Iqumrhu lokuqala elinamazwe amaninzi, iTourism Coalition enabachaphazelekayo abaninzi yinkwenkwezi entsha kwiCOP26 eGlasgow.
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeManyano » Iqumrhu lokuqala elinamazwe amaninzi, iTourism Coalition enabachaphazelekayo abaninzi yinkwenkwezi entsha kwiCOP26 eGlasgow.
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • Intetho yezoKhenketho • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • I-WTN
Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) awukamenywa.
Isenzo, hayi isibhengezo kufuneka ibe yindlela eya phambili yokuvuselela ukhenketho ngempumelelo, kwaye olu manyano lulungele ukuqaqamba, kunye nembumba entsha enamandla.
I-COP 26 eGlasgow ayikufumani nje umyalezo kwihlabathi, ukuba ukhenketho kufuneka lube yinxalenye yesisombululo sokutshintsha kwemozulu, kodwa sisenzo sokuqala ngabakhenkethi. Abathathi-nxaxheba bokuqala bamazwe amaninzi umanyano kukhenketho .
Lixesha lesenzo, hayi izibhengezo.
Ikamva elinengeniso nemozulu enobuhlobo kuKhenketho lweHlabathi liye laqaqamba ngakumbi.
INkomfa yeZizwe eziManyeneyo yoTshintsho lweMozulu ye-2021 eqhubekayo ngeli xesha e-Glasgow, e-UK ingaba sisiqalo sendlela entsha yentsebenziswano yehlabathi kunye nokubandakanyeka kwecandelo likarhulumente kunye nelobucala.
Umbutho woKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) ubonwa ngabaninzi njengongasebenziyo, ongafumani nkxaso-mali yaneleyo, nongalawulekiyo usenokuba sele evukile.
Yaqala ngombono woMphathiswa wezoKhenketho waseSaudi, HE Ahmed Aqeel AlKhateeb, kunye neqabane lakhe eSpain HE Reyes Maroto ukwabelana ngalo mbono.
Ekugqibeleni, amazwe kunye nabachaphazelekayo bayanyuka ngelixa i-UNWTO ngenxa yokungabikho kobunkokeli ilele. Oku kubonisa inguqu ekudala ifuneka kushishino lwehlabathi lokhenketho kunye nokhenketho, kwaye mhlawumbi nethuba le-UNWTO entsha ekwenzeni.
ISaudi Arabia yaziwa ngokutyala iibhiliyoni kuphuhliso lokhenketho lwehlabathi. Oku akuthandeki kuphela kwishishini, elibethwe yi-COVID-19 phantse iminyaka emibini, kodwa liyakhuthaza kwaye liyakhuthaza.
Ngelixa uMbutho woKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) usayina izibhengezo, imanyano yokuqala yamazwe amaninzi yabachaphazelekayo imalunga nesenzo.
Akuyomfuneko ukuthetha, inkxaso-mali yinyani.
Owayesakuba ngumongameli waseMexico kunye nosihlalo woqoqosho lwemozulu entsha
ISaudi Arabia ibonakalise ukuba yibhulorho phakathi kwelizwe eliphuhlileyo kunye nelisaphuhlayo. Namhlanje abaphathiswa abathathu bezokhenketho abavela eKenya, eJamaica, naseSaudi Arabia abazimase iphaneli eGlasgow ngotshintsho lweMozulu bathi: Ishishini lezoKhenketho lifuna ukuba yinxalenye yesisombululo kutshintsho lwemozulu oluyingozi
Ukuseka olu manyano lutsha yiprojekthi yesigaba esi-3.
Umsitho wanamhlanje ubuzinyaswe ngooRhulumente abavela eMelika, eUK, eKenya, eJamaica naseSaudi Arabia.
Imibutho yamazwe ngamazwe ethathe inxaxheba namhlanje:
Ukongeza, iBhanki yehlabathi kunye neHarvard bamenywa ukuba bajoyine umfelandawonye.
I-ICC imele ii-SME's ezizigidi ezingama-45. I-65% ikumazwe asakhasayo.
Xa ebuzwa ukuba imibutho emincinci efana neBhodi yezoKhenketho yaseAfrika kunye neWorld Tourism Network iyakumenywa nini ukuba ijoyine, uGloria Guevara ubonise ukuba oku kungaxoxwa ngenyathelo lesi-2 okanye lesi-3.
I-UNWTO ebonakalayo ayikamenywa.
Umphathiswa wezoKhenketho waseSaudi u-Ahmed Alkhateeb
Snr Kuhle uthi:
Novemba 4, 2021 kwi-13: 04
Obu bubuso obufanayo obudala, ngoku buxhaswa yimali yaseSaudi, ethetha izinto zakudala ezifanayo. Babenalo ithuba lokuthabatha amanyathelo, kodwa abazange benze njalo! UGloria wayeyintloko ye-WTTC kwaye wabeka phambili ukukhula, ukukhula, ukukhula, ngelixa ebeka ecaleni okusingqongileyo, ngexesha lakhe. Masiyibonele le nto ukuba iyintoni na – ilinge elilambathayo kwabo banamandla ukugcina ukubambelela kwabo okuthe gqolo ukuyekelela kwi-ajenda, ngelixa bebukele iplanethi isitsha ngenxa yeminyaka yabo yokungasebenzi.